पोथी बासे धुरी कटाइन्छ ! - inaruwaonline.com
पोथी बासे धुरी कटाइन्छ !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २१, २०७२ समय: १०:१६:५०
‘हेल्लो! राधा के छ खबर? अहिलेसम्म अनलाइन? केटी मान्छे भएर यति रातिसम्म अनलाइन बस्दा अरुले के भन्लान् !’ उत्तर फर्काउन नपाउँदै उसले प्रश्नको वर्षा नै गरायो। ‘केटी भएर’ भन्ने शब्दले दिमाग चक्रायो, किनकी म सामान्य कुरामा पनि केटीलाई नराम्रै सोची हाल्ने प्रवृत्ति रुचाउँदिन । सधैँको च्याटमा विवाद मात्र गर्न रुचाउने एलेक्सले आज पनि विवाद गर्छ नै भन्ने लागेर उत्तर दिएँ।
‘अँ ठिकै छ, तिम्रो के छ खबर बरु सुनाऊ, लामो समयपछि बोलायौ नि? अनि केटा मान्छे भएर अहिलेसम्म अनलाइन?’ मैले पनि एकै पटकमा उसको सबै प्रश्नको उत्तर दिएँ अनि उसकै शैलीमा प्रश्न पनि गरेँ। मलाई थाहा थियो एलेक्सले फेरि पुरुष हुनुको घमण्ड र हैसियत पक्कै देखाउँछ किनकी मैले उसकै शैलीमा च्याट सुरु गरेकी थिएँ । नभन्दै उत्तर पनि त्यस्तै आयो –‘कस्ती ठाडो स्वभाव भाकी केटी यार तिमी, केटीलाई यस्तो स्वभाव सुहाउँदैन नि, यति रातिसम्म अनलाइन बस्दा अरुले नराम्रो सोच्लान् कि भनेर।’ उसले फेरि पनि केटी हुनुको गल्ती दर्शायो । रातको १२ बजेको छ, एलेक्ससँगको फेसबुके गफलाई अघि बढाऔँ कि नबढाउँ दोधारमा परेँ । सोचेँ, आजको गफमा पुरुष हुनुको घमण्डको सीमा नाप्नै पर्यो । अनि सुरु गरेँ–
‘म यस्तै ठाडो स्वभावकी छु भन्दा भन्दै किन बोलाएको त? के तिमी केटालाई चाहिँ अबेरसम्म अनलाइन बस्दा फूल माला पहिरिदिने कोही छन्?’
‘अरे यार त्यस्तो भन्न खोजेको हैन, तिमीलाई अरुले नराम्रो सोच्लान् कि भनेर साथीको नाताले भनेको मात्रै हुँ।’
मनमनै सोचेँ, बिचमा ‘अरु’ भन्ने शब्द घुसारेर आफ्नै सोचाइको स्तर देखायो ।
‘अरुलाई किन दोष दिन्छौँ? नराम्रो लाग्यो भने नबोल, यति राति दिमाग नचाट मेरो। ’ ‘नरिसाउन हउ, मैले त्यस्तो नराम्रो के नै भनेको छु र?’
‘यति राति केटी मान्छे भएर..रे, केटी मान्छे राति अनलाइन हुँदा नराम्रै सोच्नु पर्छ र? तिमी जस्तो यो जमानाको केटाको सोच देखेर दया लाग्छ एलेक्स साँच्चै हो । तिमीसँग विहे गर्ने केटी नराम्ररी फस्छे।’
मैले पनि यो पटक त उसको घमण्डमा नै प्रहार गरिदिएँ । कहिलेकाहीँ यस्तै च्याट उ आफूले आफ्नै प्रशंसा गरेर थाक्दैनथ्यो, आफूलाई पाउने केटी साह्रै लक्की हुन्छे भन्दै फुईँ नलगाएको पनि होइन। मेरो प्रहार सही ठाउँमा लागेछ क्यारे–‘तिमी जस्ती घमण्डी केटीको त झन् विहेको भोलिपल्टै डिभोर्स हुन्छ। तिम्रो स्वभावलाई कसले झेल्न सक्ला र खै?’
उसको रिसको पारो माथि उक्लिँदै गरेकोमा कता कता खुशी लाग्यो मलाई । सधैँ तिमी यस्ती उस्ती, केटी भनेको यस्तो हुनपर्छ भन्ने उसको साँघुरो सोचसँग विवाद गर्दा गर्दा वाक्क भएकी म आज उसको महान्पनमा नै खोट देखाइदिए। अलि ठण्डा भएर उत्तर फर्काएँ–‘म तिमी जस्तो केटीलाई निश्चित घेराभित्र सीमित राख्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने केटासँग विहे गर्दिन कसरी हुन्छ डिभोर्स? हेर राधा तिम्रो यस्तै स्वभाव भइरहने हो भने बुढी कन्या बस्छौँ।’
उसको रिस थामिने सुरै थिएन, केटी हो भन्दैमा पुरुषत्वको भाषण दिने साथीलाई दिमाग सेलाउन नदिने प्रण गर्दै फेरि रिस नै उठ्ने जवाफ दिएँ –‘तिमी जस्तो संकिर्ण सोचाई भएको, आधुनिकताको खोल मात्र ओढेको केटोसँग विहे गर्नु भन्दा बुढी कन्या बस्नु बेस।’ ‘हेर राधा म जस्तो आधुनिक, समय अनुसार चल्न सक्ने, परिस्थितिलाई बुझ्ने केटो खोजेर देखाऊ सक्छाँै भने, नत्र तिम्रो यो घमण्डीपनलाई कुनै केटाले थेक्न सक्दैन।’
आधुनिकताको खोक्रो भाषण फेरि दियो । किनकी यो उसको बानी नै बनिसकेको छ । ‘एलेक्स, तिमीले आफ्नाी प्रेमिकालाई त खुट्टाको जुत्ता सम्झिँन्छौ होला है? विचरी एलिना नराम्रोसँग फसी, खै! कसरी जिन्दगी बिताउँछे होला र तिमीसँग?’ कहिले काँही मेरो घमण्डीपनलाई होच्याउन उसले आफ्नी प्रेमिका एलिनाको खुबै तारिफ गथ्र्यो । त्यसैले उसलाई बिचमा ल्याएर मैले पनि उम्लिएको रिसलाई झन् उमाल्ने काम गर्दिएँ । रिसले साँच्चै सीमा नाघेछ क्यारे, धम्कीको भाषामा जवाफ आयो–‘मलाई यस्तो हेप्यौ हैन राधा, यस्तै बानी हो भने ठिकै छ अबदेखि तिमीसँग कहिल्यै बोल्दिन ।’
उसको रिसलाई थमथम्याउन थोरै फुर्काउने कोशिस गरेँ । उसको थोरै मात्र प्रशंसा गरिदिँदा मख्ख पर्ने उसको बानी कहिले काँही बच्चा जस्तै लाग्थ्यो । प्रशंग मोडेर कुरा गरेँ – ‘अँ आज त दामी प्रोफाइल पिक्चर राखेछौँ त, कस्तो सुहाएको रातो रिसर्ट, जिन्स पाइन्ट, आँखामा कालो चस्मा झन् पछाडिको सामन्द्रीक सीन ।’ साँच्चै मख्ख पो भएछ –‘देख्याैँ म कति आधुनिक छु?’ आफ्नो पहिरनमा आधुनिकता देख्ने एलेक्सको रिस शान्त भएसँगै फेरि प्रश्न गरेँ– ‘एलेक्स, यदि कुनै दिन तिम्री एलिना बदलिएर म जस्तै घमण्डी अनि ठाडो स्वभावकी भइन् भने के गर्छौँ?’
– ‘तिमीलाई थाहा छैन, हाम्रो गाउँ घरमा ‘पोथी बासे धुरी कटाउने’ चलन छ नि हो त्यस्तै गर्छु।’
लौ यो पटक त म उसको जवाफले हैरान भएँ, छागाबाट खसेजस्तो अनुभव भयो । आधुनिकताको नकाब भिरेको एलेक्सले यतिसम्म गिरेर सोच्ला भनेर कल्पना पनि गरेकी थिइन्। आफूलाई केही सम्हालेर उत्तर लेखेँ–हेर एलेक्स, तिमीले आफूलाई जति परिस्कृत र आधुनिक युवक सोचेपनि तिम्रो यस्तो घिन लाग्दो सोचले तिम्रो फेसबुके साथी मात्र भएकोमा पनि पछुतो छ । आधुनिक केवल केटीलाई तल गिराएर म पुरुष हुँ भन्ने सोच राख्दैमा हुँदैन । तिम्रो पहिरनमा जति आधुनिकता छ, त्यस्तै तिम्रो सोच्ने क्षमतामा पनि निखार आउनु जरुरी छ।
एउटै समाजको तिमी पुरुष र हामी महिलामा शारिरीक बनावटमा भिन्नता पक्कै हो तर के दुवैले पाउनुपर्ने आत्मसम्मान उस्तै हुनुपर्ने होइन र? तिम्रो प्रोफाइल फोटोको पछाडिको सामुन्द्रीक शीन जस्तो तिम्रो सोचाई नि फराकिलो हुनपर्ने होइन र? आज साच्चै तिम्री एलिनादेखि दया लागेर आइरहेको छ। उसले यस्तो केटासँग प्रेम गरिरहेकी छे, जसले कुनै दिन उसकै घाँटी निमोठ्न पछाडि पर्दैन ।
हो एलेक्स, आज तिमीसँग विलासी सम्पूर्ण चीज छन्, जुन तिम्रो पैसाले किन्न सक्यो। तर तिम्रो सोचाइलाई अब कुनै पनि नगदे धनले बदल्न सक्दैन । अष्ट्रेलिया बसेर मनग्य पैसा कमाएका छाँै, काठमाडौंमा घर किनेका छौँ, दिनहुँ सुविधासम्पन्न कारमा घुमफिर गर्छौँ तर तिमी मेरा लागि दुनियाकै गरिब व्यक्ति भयौ । तिमी भन्दा त दिनहुँ मजदुरी गरेर धुलो मैलोमा छोपिन बाध्य भएका कैयौँ साइँला, माइँला धनी छन्, किनकी उनीहरुको बाहिरी आवरण मैलो भएर के भो उनीहरुको सोच कम्तिमा तिम्रो जस्तो घिन लाग्दो छैन ।
समयसँगै चल्न सिकेका छन्, किनकी अब उनीहरु पोथी बासेपनि धुरी कटाउनु पर्छ भन्ने अन्धविश्वासमा छैनन् । एलेक्स, आजदेखि कुनै कुरामा तिम्रो र मेरो विवाद हुने छैन । यो लामो उत्तरसँगै तिमी मेरो फेसबुकै साथीको लिष्टबाट सदाका लागि हटिसकेका छौ । हो, अघि धम्कीको भाषामा भनेका थियौ नि तिम्रो यस्तै बानी हो भने कहिलै बोल्दिन भनेर तिम्रो यो चाहना पनि पूरा भयो ।
ल कुरै कुरामा रातको एक पनि बजिसकेछ । तर एलेक्सको ‘पोथी बासे धुरी कटाइन्छ’ भन्ने वाक्यले दिमागमा झट्का हानिरह्यो । मैले गाउँमा कुखुराको पोथी बास्दा काटेर घरको धुरी कटाएको नदेखेको हैन, सोचेँ, पक्कै एलेक्स जस्तै मै हुँ भन्ने पुरुषले चलाएको चलन होला यो । तर अहिले समाजका केही नाजायज कुरिति हट्दै गएको छ, विस्तारै एलेक्स जस्तो सोच भएका पुरुषहरु पनि बदिलने आशा राख्दै मोबाइल थन्काएँ।